Enyemaka Aka: Ọnọdụ Mbido | Martech Zone
M mere gafee nnukwu post a mgbede banyere State nke mbọn. Anaghị m ekwenye ma ọlị na onye edemede, Brad VanAuken, mana achọrọ m ịgbakwunye isi ole na ole. Ọ meela afọ ole na ole kemgbe m na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị na-ahụ maka akara aka n'akụkụ, mana achọrọ m ịkọwa isi okwu nke nwere ike ịpụta ma mkpa ekwupụta.
Mgbe m na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ n’afọ iri gara aga, ahụrụ m mbelata nke ike ịchịkwa ma ọ bụ ijikwa akara a. Anya, ọ bụ nnọọ mfe simple na agba, na logos, na ngwaahịa agbanweghị. Otú ọ dị, ndị brand mere. Dị gbanwere site n'èzí.
Ozi anyị na ọhụụ gbanwere. Otú ọ dị, ndị ajụ site na nke ndi mmadu natara brand na-agbanwe site n'aka anyị na ndị mmadụ, site na Internetntanetị, site na ndị nnyefe anyị, site na ndị ọrụ ndị ahịa anyị, site na ndị ahịa anyị, site na asọmpi n'ịntanetị, wdg.
Ọ bụ azụmahịa dị ka ọ dị na mbụ. Anyị niile fegharịrị ma mụmụọ ọnụ ọchị ma tụọ mkpịsị aka anyị aka mgbe ndị dibia a na-ekwu ma na-eme ihe ndị na-emebi anyị, na anyị emeghị ihe ọ bụla. N'ihi ya, ika ahụ malitere ịda ada - ma ha ka na-ada. Ahụrụ m ya, m tiri mkpu, egosiri m ụzọ ọpụpụ (ekele).
Mgbe ụfọdụ ọ naghị adị ọsịsọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana anyị na-ahụ mgbanwe a ebe niile. Esemokwu bụ ma ndị njikwa nke ika gị ọ na - eme ihe ọ bụla. Kedu ka ndị njikwa akara gị si arụ ọrụ nke ọma n'izi ozi ọ bụ na ụlọ ọrụ gị na-anwa ibuga ndị ahịa ya site na ndị ọhụụ ọhụụ a? Ndị ọrụ gị niile achọpụtala na ha na-achịkwa akara ahụ? Hà na-aza ajụjụ maka ya? Kedu ka esi azụ ha iji mee nke a? Kedu ihe blọọgụ ha na-ekwu banyere akara gị?
Ugbu a karịa olu njikwa gị bụ ogo ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. Ekwenyere m na Mr. VanAuken na-arụ nnukwu ọrụ nke ịkọwa nke a. Bulite okwu a elu bụ nhọrọ. A na-ekpughere ndị ahịa na nhọrọ ọhụrụ ozugbo ha nụrụ akụkọ ọjọọ banyere akara gị. Ọfụma, n'abalị ọzọ m eziga banyere Swapagift.com. Mgbe m kwusịrị, abịara m hụ otu nnọkọ na-ekwu maka ọrụ ahụ wee hụ ọrụ ọzọ edepụtara n'ụzọ dị mma karị… CardAvenue. N'ime obere oge achọtara m nnukwu ngwaahịa (B NOTGH through site na ahịa ya) wee chọta onye na-eweta otu ngwaahịa ahụ (B productGH through site na ahịa ha)!
Ọ dị ịtụnanya etu akụkọ ọjọọ ga-esi mee ngwa ngwa na asọmpi ahụ ga-ebili. Karịa mgbe ọ bụla, Onye njikwa ika gị kwesịrị ịgbalịsi ike na-ekwurịta okwu n'ime dị ka ọ na-eme na mpụga. Ha kwesiri ibu onye nkwusa ozioma na onye nkuzi maka ndi oru gi nile. Ọrụ gị, ngwaahịa gị, na nke ka nke bụ na ndị gị bụ ndị na - ekwu okwu n’egwuregwu gị. Olee otú ha na-eme?
Tags: brandatụmatụ atụmatụala nke akara
Dee 29, 2006 na 11: 35 AM
Enwere m obi ụtọ, dịka onye ọchụnta ego na-amalite, ka m mụtara banyere ịkparịta ụka n'socialntanet na ịkọ aha onwe gị site na mmalite. N'isiokwu ị zoro aka na ya, onye edemede ahụ mesiri isi ihe ndị a ike: “mmata, nnweta, uru, ọdịiche dị mkpa na njikọ mmetụta uche.” Ana m arụ ọrụ na ịkụ ihe ndị a ka m na-etolite. Ihe m lekwasịrị anya ugbu a bụ inye uru maka n'efu, iji wulite ntụkwasị obi. Na mgbakwunye, enweghị m nsogbu site na ọrụ ọchịchị gọọmentị. BTW, M na-eme nnukwu!
Vince, naanị nkwado., EBay na-ere ahịa, otu esi ede akwụkwọ.